गृहमन्त्रीकाे प्रश्न : हाम्रो समाज राम्रोलाई प्रशंसा गर्न किन कन्जुस्याईं गर्छ ? – Makalukhabar.com
गृहमन्त्रीकाे प्रश्न : हाम्रो समाज राम्रोलाई प्रशंसा गर्न किन कन्जुस्याईं गर्छ ?
मकालु खबर	 Oct 16, 2020 मा प्रकाशित 466
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले नेपाल प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी उत्कृष्ट ढंगबाट निर्वाह गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । ६५ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा शुक्रबार हेडक्वाटरमा सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले नेपाल प्रहरीको प्रशंसा गरेका हुन् ।
उनले कार्यक्रममा भने, ‘नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाले जुन निर्भिकता र दृढताका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्, त्यो प्रशंसनीय छ । नराम्रोलाई पटक–पटक नराम्रो भन्न नहिचकिचाउने हाम्रो समाज राम्रोलाई प्रशंसा गर्न शब्द खर्च गर्न किन कन्जुस्याई गर्छ ?’
यस्तै मन्त्री थापाले राजनीतिक आवरणमा चन्दा असुली, विकास निर्माणमा अवरोध र आम नागरिकका हक अधिकार निर्भिकताका साथ प्रयोग गर्ने वातावरणमा बाधा पैदा गर्ने कोशिस गरिरहेको पनि बताए ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमकाबीच पनि प्रहरीले खेलेको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरे । संगठनप्रति नागरिकको आशाको दियो बचाइराख्न आग्रह गर्दै अपराधको प्रवृति विश्लेषण गरेर रणनीतिक रुपमा योजनावद्ध तरिकाले अगाडि बढ्न उनले सुझाव समेत दिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई बाबुरामको प्रश्न : ‘ठूला भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानविन गर्न कसले रोकेको हो ?’
शेखर कोइरालाको माग–‘विज्ञ टोली गठन गरी नेपाल-चीन सीमाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याऔं’